Yaa looga shakiyey dhibaatadii ku dhacday diyaradda Daallo Airlines? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Yaa looga shakiyey dhibaatadii ku dhacday diyaradda Daallo Airlines?
Mareeg.com: Iyadoo uu weli socdo baaritaan ku saabsan wixii sababay qarax ka dhacay diyaaradda Daallo Airlines talaadadii aynu soo dhaafnay waxyar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha Muqdisho, kuna soo jeedday Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa waxaa soo baxay warar horudhac ah.
Warbaahinta reer Galbeedka ayaa qoray in ilo laga helay dhanka dowladda Mareykanka ay sheegayaan in shaki weyn ka jiro in qaraxa ka dhacay diyaaradda uu ahaa mid la qorsheeyey.
Guddii ay dowladda Soomaaliya u saartay baaritaanka oo ka mid yihiin xubno ka socda wasaaradaha ammaanka, duulista hawada, khubaro Soomaali iyo ajaanib ah iyo xubno ka socda shirkadda Daallo ayaan weli soo saarin wax natiijo ah.
Wasiir kuxigeenka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Isaaq Cismaan oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in Guddi loo saaray arrintaas, ayna rajaynayaan in waqti dhow ay soo baxdo natiijada baaritaanka.
“Guddi ka kooban hey’adaha ammaanka, Wasaaradda iyo dad kale oo khubaro ah ayaa loo saaray sababihii keenay dhibkaas diyaarada ku dhacay, arrintaasna wali waa lagu jiraa” Maxamed Isxaaq.
Wargeyska The Mirror ee kasoo baxa UK, ayaa qoray in ilo wareedyo laga helay dowladda Mareykanka arbacadii shalay ay sheegeen in baaritaanka ilaa hadda la sameeyey uu muujinayo raadka maaddada loo yaqaanno TNT oo sameysa qarax, taasoo la xusay in haraageeda laga dhex helay diyaaradda.
Wararka aan la xaqiijin ee laga helay dhanka Mareykanka ayaa sheegaya in dowladda USA rumeysan tahay in waxa ka dhacay diyaaradda Daallo ahaayeen qarax ay geysteen Alshabaab.
Kabtanka diyaarada waday oo lagu magacaabo Vlatko Vodopivec ayaa Wakaalada wararka ee AP u sheegay in qaraxa waxa sababay ay ahayd Bambaano.
Ururuka Alshabaab oo lagu yaqaanno inuu sheegto weeraradda uu fuliyo ayaan sheegan weerarkaas, welina ma beenin wararka horudhaca ah ee kasoo duulduulaya dhanka Mareykanka.
Diyaraadda Daallo Arilines oo nuuceedu ahaa (Airbus A321), duullimaadkeedu ahaa (3159) ayaa talaadadii 74 rakaab ah ka qaadday Muqdisho, waxaana wax qarax u eg ku qabsaday hawada xilli ay dulmareysay gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in hal qof oo god ka sameysmay diyaaradda ka dhacay uu dhintay, halka laba kalana dhaawac soo gaaray.
Diyaaradda ayaa si degdeg ah ugu soo laabatay garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaana lagu guuleystay in si nabad ah looga soo saaro rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa.
Why does terrorism dominate ‬ ‪the headlines?‬